Iindaba-Ukusetyenziswa KwiFayibha yeCarbon
I-Weihai Snowwing Outdoor Equipment., Ltd.
Umgangatho nguMphefumlo weShishini
Umbhobho weCarbon Fiber
Iphepha leCarbon Fiber
I-Carbon Cue Shaft
Iimveliso zeCarbon zangaphandle
I-Trekking Walking Pole
Ukuhanjiswa(iPacking Way Delivery Time)
Ukusetyenziswa kwiCarbon Fiber
Kwiicomposites zefiber eqinisiweyo, i-fiberglass "lihashe lomsebenzi" kwishishini. Isetyenziswa kwizicelo ezininzi kwaye ikhuphisana kakhulu nezinto zemveli ezifana neenkuni, isinyithi, kunye nekhonkrithi. Iimveliso ze-Fiberglass zomelele, zikhaphukhaphu, aziqhubeki, kwaye iindleko zemathiriyeli ekrwada ye-fiberglass ziphantsi kakhulu.
Kwizicelo apho kukho i-premium yokwandisa amandla, ubunzima obuphantsi, okanye kwizinto zokuthambisa, ke ezinye iifiber zokuqinisa ezibiza kakhulu zisetyenziswa kwi-FRP composite.
Ifayibha ye-Aramid, efana ne-DuPont's Kevlar, isetyenziswa kwisicelo esifuna amandla aphezulu okuqina abonelelwa yi-aramid. Umzekelo woku sisikrweqe somzimba kunye nesithuthi, apho iileya ze-aramid ezidityanisiweyo ezidityanisiweyo zinokumisa imijikelo yompu onamandla aphezulu, ngenxa yenxalenye yokuqina okuphezulu kokuqina kwemicu.
Iifayibha zekhabhoni zisetyenziswa apho ubunzima obuphantsi, ukuqina okuphezulu, ukuhanjiswa okuphezulu, okanye apho inkangeleko ye-carbon fiber weave ifunwayo.
I-Carbon Fiber kwi-Aerospace
I-aerospace kunye nendawo yayiyenye yemizi-mveliso yokuqala eyamkela i-carbon fiber. Imodyuli ephezulu yefayibha yekhabhoni yenza ukuba ilungele ngokwesakhiwo ukubuyisela iialloys ezifana ne-aluminium kunye ne-titanium. Ukonga ubunzima be-carbon fiber esona sizathu siphambili se-carbon fiber yamkelwe lishishini le-aerospace.
Yonke iponti yokonga ingenza umahluko omkhulu ekusetyenzisweni kwepetroli, yiyo loo nto iBoeing entsha i-787 Dreamliner ibe yeyona nqwelo-moya yabakhweli ithengiswa kakhulu kwimbali. Uninzi lolwakhiwo lwale nqwelomoya ziicomposites zecarbon fibre.
Imidlalo yokuzonwabisa yenye icandelo lemarike elizimisele ngakumbi ukuhlawula ngaphezulu kokusebenza okuphezulu. Iirakethi zethenisi, iiklabhu zegalufa, amalulwane e-softball, iintonga zehoki, kunye neentolo zokutoliba kunye nezaphetha zonke zimveliso eziqhele ukwenziwa ngeekompositi zekhabhoni eziqinisiweyo.
Izixhobo zobunzima obulula ngaphandle kokunciphisa amandla yinzuzo eyahlukileyo kwimidlalo. Umzekelo, kunye ne-racket ye-tennis ye-tennis elula, umntu unokufumana isantya esikhawulezayo se-racket, kwaye ekugqibeleni, ukubetha ibhola ngokukhawuleza nangokukhawuleza. Iimbaleki ziyaqhubeka nokutyhala ngenzuzo kwizixhobo. Yiyo loo nto iibhayisekile ezinzulu zikhwela zonke iibhayisekile ze-carbon fiber kwaye zisebenzise izihlangu zebhayisekile ezisebenzisa i-carbon fiber.
IiBleyi zeTurbine yomoya
Nangona uninzi lweeblade zeinjini yomoya zisebenzisa i-fiberglass, kwiincakuba ezinkulu (kaninzi zingaphezulu kwe-150 ft ubude) ziquka indawo esecaleni, elubambo oluqinisayo oluqhuba ubude bencakuba. Ezi nxalenye zihlala ziyi-100% yekhabhoni, kwaye zingqindilili njenge-intshi ezimbalwa kwingcambu yeblade.
Ifayibha yeCarbon isetyenziselwa ukubonelela ngokuqina okuyimfuneko, ngaphandle kokongeza ubunzima obuninzi. Oku kubalulekile kuba ukuba khaphukhaphu iblade yeinjini yomoya, kokukhona isebenza kakuhle ekudaleni umbane.
Iimoto eziveliswe ngobuninzi azikayisebenzisi i-carbon fiber; oku kungenxa yokunyuka kweendleko zemathiriyeli ekrwada kunye notshintsho oluyimfuneko ekusetyenzisweni kwezixhobo, kunjalo, ukodlula izibonelelo. Nangona kunjalo, i-Formula 1, i-NASCAR, kunye neemoto eziphezulu zisebenzisa i-carbon fiber. Kwiimeko ezininzi, kungekhona ngenxa yeenzuzo zepropati okanye ubunzima, kodwa ngenxa yokujonga.
Zininzi iinxalenye zeemoto ze-aftermarket ezenziwe nge-carbon fiber, kwaye endaweni yokupeyintwa, ziqatywe ngokucacileyo. I-carbon fiber weave eyahlukileyo iye yaba ngumqondiso we-hi-tech kunye ne-hi-performance. Enyanisweni, kuqhelekile ukubona icandelo le-automotive ye-aftermarket engumaleko omnye we-carbon fiber kodwa inomaleko amaninzi e-fiberglass engezantsi ukuthoba iindleko. Oku kuya kuba ngumzekelo apho inkangeleko ye-carbon fiber eneneni ithatha isigqibo.
Nangona ezi zezinye zeendlela eziqhelekileyo zokusetyenziswa kwe-carbon fiber, izicelo ezininzi ezitsha zibonwa phantse yonke imihla. Ukukhula kwe-carbon fiber kukhawuleza, kwaye kwiminyaka emi-5 kuphela, olu luhlu luya kuba lude kakhulu.
Ixesha lokuposa: Jul-28-2021
Icwecwe leCarbon, I-Carbon Fiber Rod, ICarbon Fiber Square Tube, Umbhobho weCarbon Fiber, I-Carbon Fiber Cue Shaft, ICarbon Fiber Telescopic Tube,
Yang ting idolophu huancui weihai 264200 China
Yenziwa Njani ICarbon Fiber?
Yintoni iCarbon Fiber?